China Rubber Stator sy Rotor an'ny milina fampidinana sy orinasa mpamatsy | Arex
Ny stator sy ny rotor, izay ampiasaina amin'ny milina fampidirana XJK, andiany XJQ, andiany SF, andiany BF, andiany KYF, andiany XCF, andian-tsarimihetsika JJF, andiany BS-K.
Ny rotor sy ny stator an'ny masinina fampidinana dia matetika no ampidirina amin'ny sisin-taolana vy sy ny fingotra mahazaka. Ny sisin-taolana vita amin'ny vy dia vita amin'ny fanapahana ny lelafo ary avy eo atsofoka tsara eo ambanin'ny fenitry ny fizotrany. Ny tanjaka sy ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny sisin-taolana dia manome antoka ny amin'ny fandanjana ny detection amin'ny alàlan'ny balancer mahery. Ny kodiarana vita amin'ny kodiarana sy ny stator an'ny masinina misy ny flotation dia nampifandraisina tamin'ny fingotra mahazaka akanjo ary avy eo namboarina tamin'ny hafanana ambony.
Ny orinasanay dia manana volcanizer takelaka lehibe miisa 3600 taonina ary manana ny fahaiza-manao mamokatra rotor sy stator milina fampidinana avy amin'ny savaivony 200 ka hatramin'ny 2400 mm. Raha miavaka kokoa ny fangatahana dia azontsika atao ny manamboatra azy io arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Fananana fitaovana vita amin'ny fingotra
Hery matanjaka ≥
Coefficient asidra (base) 20% H₂SO₄ （20% NaOH） 18 ℃ x24h
Elongation amin'ny fiatoana ≥
Hamafin'ny morontsiraka A
Coefficient fahanton'ny rivotra mafana≥90 ℃ x24h
Metaly sy adhesion sosona≥
Manala endrika deformation maharitra≤
Coefficient solika 20 # menaka 100 ℃ x24h
1. Fanoherana ny abrasion
2. fanoherana ny ranomaso
3. fanoherana ny fiantraikany
4. Fiorenan'ny simika
5. Fiainana maharitra
1.Famaritana ireo volavolam-bolo sy tahan'ny any amin'ny faritra be krizy ary hamafiso ny toetrany amin'ny alàlan'ny fizotran'ny asa.
2. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana vita amin'ny fingotra na polyurethane bebe kokoa amin'ilay toerana ilana indrindra ny ampahany manontolo. Ary ity dia haharitra ny fiainana amin'ny fiasana.
3.Manome fanaraha-maso sy fikolokoloana matihanina rehefa ampiasain'ny mpanjifanay. Ary ny fahazoana ny tatitra fanavaozana tsy tapaka amin'ny fizotran'ny asa, izay hanome sy hampitombo ny fisian'ny zavamaniry.
1.Ny fitaovana manta dia mampiasa bosoa vy tsy misy fangarony 3CR12, raha toa ny harafesina sy ny bolt amin'ny fanidiana.
2.Fomba fanodinana valiny momba ny fenitra ISO ataon'ny mpiasa efa za-draharaha ary tazomy ny fandanjana sy ny marina raha toa ka mihombo.
3.Ny asa ampanjifaina dia miankina amin'ny takian'ny mpanjifa na mahita ny vahaolana avy amin'ny ekipanay teknolojia.
Previous: Polyurethane Stator Sy Rotor Of Flotation Machine
Manaraka: Pipe vy milahatra polyurethane